Sharper Image Ikuku Earbuds Ntuziaka ntuziaka [XO-9656-2] - Akwụkwọ ntuziaka +
Sharper Image Ikuku Earbuds Ntuziaka ntuziaka [XO-9656-2]
Ihe sitefazlul October 18, 2020 October 18, 2020
13 Comments na Ebube Ihe Ntanetị Ikuku Ntanetị Ikuku [XO-9656-2]
Home » Foto dị nkọ » Sharper Image Ikuku Earbuds Ntuziaka ntuziaka [XO-9656-2]
Sharper Image Ezi Ikuku Earbuds
Tupu Beg Malite…
Iji hụ na nchekwa dị mma yana nke kwesịrị ekwesị, gụọ ozi nchekwa niile tupu iji ngwaọrụ. Jiri naanị batrị, chaja, ngwa na ngwa ahịa were naanị batrị emepụtara.
Ngwaọrụ a abụghị ihe egwuregwu, Ekwela ka ụmụaka ma ọ bụ anu ulo jiri ma ọ bụ jiri ngwaọrụ a.
Akwakasịla, gbanwee, ma ọ bụ mezie ngwaọrụ ahụ.
Etinyela n’ime mmiri.
Obere batrị nwere ike ime ka njikọ Bluetooth adịghị mma ma ọ bụ ụda olu.
Ekpughela ihe ahụ na oke okpomọkụ (ọkụ ma ọ bụ oyi), ọkụ na-emeghe, iru mmiri, ma ọ bụ ọnọdụ mmiri.
Ekwela ka ọdụ ụgbọ USB, jaị ike ma ọ bụ ntinye ndị ọzọ nke ngwaọrụ ahụ ka ekpughere ha n'ájá ma ọ bụ mmiri, ma ọ bụ kpọtụrụ ihe ọ bụla na-eduzi ihe dị ka mmiri mmiri, ọla ntụ, wdg.
Ndụ Ndụ Batrị
Nnwale nke Southern Telecom duziri na Feb 2019 chọpụtara na earbuds ndị a, jikọtara ya na ọtụtụ ekwentị, yana olu nwere 50%, were ihe dịka awa 3 nke egwu na oge 2 nke oge okwu. , ejiri batrị zuru ezu. Ndụ batrị ga-adị iche na ntọala ngwaọrụ, gburugburu ebe obibi na ihe ndị ọzọ.
Ajuju & Nkwado Ndị Ahịa
Maka ajụjụ, nchọpụta nsogbu ma ọ bụ enyemaka ọ bụla, biko gaa na weebụsaịtị anyị na SouthernTelecom.com wee pịa Nkwado Ngwaahịa.
STBT303 - Ezi Ikuku Earbuds Gụnyere (xl)
Nchaji Okwu (x1)
USB Nchaji USB (xl)
Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ (x1)
Nchaji Ikpe ahụ kwunye obere njikọ nke eriri USB na-eweta ihe USB n'ime ọdụdụ USB na ala nke ikpe ahụ. Ikwunye nnukwu njikọ n'ime ọdụ ụgbọ USB na kọmputa, ngwaọrụ nkwụnye USB, ma ọ bụ nkwụnye USB 5V (anaghị etinye ya) ma tinye ya na mgbidi.
Ihe ngosi Ikanam na ala nke ikpe ahụ ga-acha ọkụ RED mgbe a na-ebo ebubo ahụ, wee gbanwee RED siri ike mgbe ikpe ahụ zuru ezu.
Mepee mkpuchi nke ikpe na slide na earbuds n'ime ikpe si earbud Nchaji ọdụ ụgbọ mmiri. Ngwa nti ga-amalite na-akpaghị aka. Earbuds 'ikanam egosi ga-atụgharị siri ike Red mgbe ha na-ana na gbanyụọ mgbe ha na-n'ụzọ zuru ezu ebubo.
IHE: Mgbe earbuds na-adịghị ike, a ga-anụ olu na-egosi na ọ dị mkpa ka ha ebubo.
Ike / Gbanyụọ
Wepu earbuds na ihe nkwụnye ụgwọ iji mee ka earbuds ahụ NA.
Pịa ma jide mkpọchi ntị abụọ nke 1Multh maka-sekọnd 34 iji jiri aka gị mee ka ntị ntị ahụ dịrị.
Fanye earbuds n'ime ikpe na-akpaghị aka na-agbanye ha Gbanyụọ wee malite ịchaji.
Mee ka earbuds ahụ nwee ike site na iwepu ha na nkwụ ụgwọ ma ọ bụ site na ịpị ma jide bọtịnụ [Multi].
Mgbe obere oge gasịrị, a ga-anụ olu, na-egosi na ntị ntị 2 ejikọtara ọnụ. Otu earbud ga-acha uhie uhie na acha anụnụ anụnụ, nke ọzọ ga-akwụsịtụ na-acha ọkụ BLUE.
Kwado Bluetooth na ngwaọrụ gị wee gaa na menu Bluetooth nke ngwaọrụ gị, Họrọ STBT303 mgbe ọ pụtara.
Ozugbo e jikọtara ya na nke ọma na ngwaọrụ gị, a ga-anụ olu na ntị abụọ ahụ ga-agbachapụ BLUE oge niile.
Ozugbo ị jikọtara ya na earbuds, ị nwere ike ịhazigharị ọkpụkpọ na olu site na njikwa na ngwaọrụ gị ejikọtara, ma ọ bụ jiri njikwa earbud n'okpuru.
Pịa bọtịnụ [Multi] ka ịkwụsịtụ. Pịa ọzọ ka ịmalitegharia.
Pịa ugboro abụọ [Multi] bọtịnụ na ntị aka nri ka ịtọọ gaa na egwu ọzọ.
Ugboro abụọ pịa bọtịnụ [Multi] na nkwụnye aka ekpe ka ị gafere na egwu gara aga.
Rụọ ọrụ Voice Assistant
Iji rụọ ọrụ olu enyemaka, a ga-ejikọ earbuds TW5 abụọ M ngwaọrụ nwere olu olu, dị ka SW ma ọ bụ Google Assistant. Maka nne na iji onye enyemaka olu biko chọọ ihe nkuzi maka ha n'ịntanetị. • Pịa ma jide bọtịnụ [Multi] maka 3 sec iji mee ka ọrụ enyemaka olu nke ngwaọrụ gị rụọ ọrụ.
Pịa bọtịnụ [Multi] iji zaa oku na-abata
Pịa ma ọ bụ [Multi] bọtịnụ ọzọ iji kwụsị oku.
Pịa bọtịnụ abụọ ma ọ bụ [Multi] iji jụ oku mbata.
FCC NDỌ AKA NA NTN
Mgbanwe ma ọ bụ mgbanwe ọ bụla nke ndị ọzọ na-akwadoghị nke ọma
maka nnabata nwere ike iwepụ ikike onye ọrụ iji rụọ ọrụ akụrụngwa. Ngwaọrụ a kwadoro akụkụ 15 nke Iwu FCC. Ọrụ arụ ọrụ n'okpuru ọnọdụ abụọ a:
(1) Ngwaọrụ a nwere ike ọ gaghị ebute ndabichi na-emerụ ahụ, yana
(2) ngwaọrụ a ga-anabata nnyonye anya ọ bụla anabatara, gụnyere nnyonye anya nke nwere ike ibute ọrụ adịghị mma.
Ụghalaahia nke Sharper Image nwe
Sharper Image Ezi Ikuku Earbuds akwukwọ ntuziaka N'IHU ỌNA N'ONZ YOUR YOUR NA-AZ OFTA EZI AKW WKWỌ EZI EGO ....
Sharper Image Ezi Ikuku Earbuds na Nchaji Ileba STBT101 Ntuziaka ntuziaka Eke onyonyo Ezi Ikuku Earbuds na Nchaji Ileba onye ọrụ Manual ...
Nkọcha Ikuku Ihe Ọverageụ /ụ Igwe Ọkụ / Nzuzo Ntuziaka Onye Ntuziaka Ihe nke 207196 Daalụ maka ịzụta ihe osise Sharper ...
Sharper Image Automatic Claping Wireless Car Chaja 207670 ntuziaka ntuziaka Ihe nke 207670 Daalụ maka ịzụta ihe osise Sharper ...
Ezigbo Ezigbo Ikuku Nchekwa onwe Ntuziaka Ntuziaka [XO-9568-3] USER Manual Essos TWS Auto Pair Earbuds Model: XO-9568-3 Essos ...
Sharper Image Ikuku TV Ọkà Okwu 207072 Onye ọrụ Manual Ikuku TV Ọkà okwu Sharper Image, 207072 Daalụ ...
Ihe sitefazlul October 18, 2020 October 18, 2020 Ihe naFoto dị nkọTags: onyunyo ocha, TWS, XO-9656-2
Philips NeoViu D1 Ntuziaka ntuziaka
Igwe nyocha ụlọ igwe ROK1 CART-I Smart Manual Manual Manual
Karen H ekwu, sị:
December 27, 2020 na 12: 08 am
Enweghị m ike ijikọ na iPhone 7 m
Ihe nkwụnye ntị ahụ egosighi na ndepụta ngwaọrụ Bluetooth m
Ruth ekwu, sị:
December 28, 2020 na 9: 01 am
Na Ntọala gbalịa gbanyụọ Bluetooth gị maka sekọnd ole na ole wee laghachi. ọ kwesịrị ịgbapụta na ala nke edepụtara bluetooth ngwaọrụ.
LoisH ekwu, sị:
December 28, 2020 na 12: 30 pm
Nke ahụ mere m. N'ihi ya, m tinyere earbuds ke ikpe. Mgbe m dọpụtakwara ha ọzọ, ha gosiri m na menu Bluetooth m. Ọmarịcha ụda dị mma!
BrianH ekwu, sị:
January 5, 2021 na 8: 06 pm
Ejiri abuo abu na m nwere ike ige egwu na YouTube na ekwentị m nke ọma, mana enweghị m ike ịnụ oku ekwentị m na Samsung Galaxy S7. Ekwentị ngwa na-ekwu Bluetooth bụ mmasị ma ọ dịghị ihe site na buds. Echiche?
christin ekwu, sị:
January 7, 2021 na 7: 49 pm
Enweghị m ike ịnụ ihe ọ bụla na ntị ndị a.
Liv ekwu, sị:
January 10, 2021 na 8: 47 pm
Onye ọ bụla maara ma ọ bụrụ na a ga - ejikọ ha na kọmputa Window?
JAMEY ekwu, sị:
January 13, 2021 na 4: 52 pm
Rodney B ekwu, sị:
January 14, 2021 na 11: 25 pm
Ntị m na-etolite na-enweghị usoro wee bido egwu n’emetụghị ha aka. Ọ bụghị ma @ 1 oge kama ọ bụ aka nri ma ọ bụ aka ekpe. Nke ziri ezi bụ nke kacha njọ. Echiche ọ bụla na gịnị kpatara ya?
January 23, 2021 na 7: 07 pm
Kedu ihe kpatara o jiri kwuo elekere iri abụọ mgbe earbud bụ naanị awa 20?
Levi ịgbaghara ekwu, sị:
February 22, 2021 na 1: 51 pm
Ọ dị m ka nti ntị m abụghị ezigbo azụta na agaghị azụta ihe ọ bụla site na onyoonyo ọzọ. Ha arụ ọrụ ma eleghị anya ugboro atọ.
Cristal ekwu, sị:
March 5, 2021 na 6: 04 am
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị gafee karịa ??? Cuz M hapuru nke m na-agba ụgwọ ụbọchị niile ma ugbu a ha agaghị agbanye
April 16, 2021 na 1: 05 pm
Ntị ndị a anaghị adịcha mma. Enwere m ike ịgba ha ụgwọ, jikọọ na laptọọpụ m ma ha na-arụ ọrụ nke ọma maka nkeji 10. Mgbe ahụ, onye ziri ezi ga-apụ. M pịa / jide aka nri aka nri, ọ ga-ike azụ na 3 sekọnd… ọma ma eleghị anya, 1 nkeji mgbe ike apụ ọzọ. Ihe ngosi batrị m na-egosi ụgwọ 90%.
Carole M ekwu, sị:
April 17, 2021 na 3: 37 pm
Kedu ka ị ga-esi wetuo olu gị? Mba, njikwa na igwe onyonyo m ma ọ bụ firestick anaghị arụ ọrụ. Daalụ n'ọdịnihu
BLACKBIRD 4K 4 × 4 HDMI Ntuziaka Onye Ntuziaka
AXESS HiFi Ikuku Portable Bluetooth Media Ọkà Okwu User Manual
TECH Lighting Belterra ọkara nhicha Mount nwụnye Guide
Dustopper HDI2A Ntuziaka ntuziaka
SAFE T ALERT Batrị Carbon Monoxide Oti mkpu ntuziaka ntuziaka
Judy on Ntuziaka Ntuzi Ntuzi Ntuziaka: Na-agbanwe Batrị & Brush
Jafar hussain on Mi Egwuregwu Bluetooth Earphones Manual
OKWU R GOOD on NVK Nkịta Nkume Ntuziaka
Richie Noble on SoundPeats Trueshift2 Ntuziaka